ZTE Watch Live dia famantaranandro vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 21 andro | Androidsis
Ilay mpanamboatra aziatika ZTE mandefa vaovao amin'ny tsenan'ny smartwatch ny famantaranandronao Watch Live vaovao, vokatra miavaka voalohany amin'ny fizakan-tenany. Mitovy aminy ihany Redmi fiambenana, Ity fitaovana ity dia voakarakara ao amin'io faritra io, ny endrika farany.
Ny marika dia efa eo amin'ny tsenan'ny smartwatch nandritra ny taona maroMety tsy ilay tsara indrindra izy io, saingy mampanantena iray mahomby amin'ny vidiny mirary. Mazava ho azy fa safidy mahaliana ilay izy raha te-hanome fanomezana vaovao ianao amin'ity Krismasy ity.
1 ZTE Watch Live, momba ny famantaranandro vaovao daholo
ZTE Watch Live, momba ny famantaranandro vaovao daholo
El ZTE Watch Live dia mampiditra dial TFT 1,3-inch miaraka amina vahaolana 240 x 240 teboka, ampy hijerena ireo zavatra ampidirin'ny orinasa amin'ity famantaranandro ity, fa kosa ho ratsy kokoa amin'ny masoandro izy io. Izy io dia manana interface tsy azo ovaina, haneho antsika koa ireo fampitandremana eo amin'ny efijery, hafatra ary fampandrenesana.
Anisan'ny asa hafa ny fandrefesana ny saturation ny oxygen oxygen ary ny tahan'ny fo, lafin-javatra roa tokony horaisina, miaraka amina refy marina avokoa. Ny fanoherana dia rano sy vovoka karazana IP68, ampio fomba fanatanjahan-tena 12, ao anatin'izany ny lomano, bisikileta, ski ary mihazakazaka eny ivelany.
Misongadina ambonin'izany rehetra izany ny fizakan-tena izay manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 21 andro amin'ny fampiasana charger magnetikaAlao an-tsaina izany hoe miasa mandritra ny roa ora latsaka ny roa na telo herinandro amin'ny fampiasana mahazatra. Ny fehy ampiasain'ny ZTE Watch Live dia ireo ampiasain'ny famantaranandro toy izany ary natao mba ahazoana aina.
ZTE JEREO LIVE
SCREEN TFT 1.3 santimetatra miaraka amina vahaolana 240 x 240 pixel
MIARITRA ISIKA IP68
AUTONOMY Manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 21 andro
Sela Mpandray Hafanana Fahavoazan'ny fo / saturation oxygen
Software Rafitra fananana manana maody fanatanjahantena 12
mifanentana Android 5.0 na avo kokoa
DIMENSION SY lanjan'ny: 40.6 x 34.6 x 10.8 mm /
El New ZTE Watch Live dia hamidy amin'ny 3 Desambra any Sina, na dia efa nilaza aza ny mpanamboatra fa te handefa azy io any amin'ny faritany hafa manomboka amin'ny 2021, na dia azo atao aza ny mividy ao amin'ny magazay ZTE. Ny vidin'ny Watch Live dia manodidina ny 229 yuan, izay amin'ny taha-bola dia manodidina ny 29 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » ZTE Watch Live dia famantaranandro vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 21 andro
Ahoana ny fakana sary amin'ny efijery feno amin'ny WhatsApp
Huawei P40, P40 Pro ary Mate 30 Pro dia mahazo vaovao farany EMUI 11